Xukuumadda Soomaaliya oo cambaraysay fal lagu dilay Culimo oo ka dhacay Shabeelaha dhexe. | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home Articles Xukuumadda Soomaaliya oo cambaraysay fal lagu dilay Culimo oo ka dhacay Shabeelaha...
Xukuumadda Soomaaliya oo cambaraysay fal lagu dilay Culimo oo ka dhacay Shabeelaha dhexe.
Muqdisho:- Ra’iisal Wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta Mudane Mahdi Maxamed Guleed Khadar ayaa cambaareeyey fal dil ah oo ka dhacay degmada raage Ceelle ee Gobolka Shabeellaha dhexe, kaas oo lagu laayey Culimo aan waxba galabsan.
Waxaa uu tacsi u diray Qoysaskii iyo ehelkii ay ka baxeen ay ka baxeen macalimiintii la dilay, xilli ay Qur’aan subcinayeen, taas oo uu ku tilmaamay fal guracan oo laga xumaado.
Mas’uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle iyo saraakiil ciidan ayaa ku wajahan deegaanka dhibku ka dhacay, si ay baaritaan iyo dabagal ugu sameeyaan kooxdii falkaasi gaysatay